Wax ka baro barnaamijka bilaashka ah iyo GNU / Linux adigoon rakibin | Laga soo bilaabo Linux
Baro barnaamijka bilaashka ah iyo GNU / Linux adigoon rakibin
Linux Post Ku Rakib | | Qaybinta, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Baro Software Bilaash ah iyo GNU / Linux: Adigoon wax rakibin.
Tobanaan sano ka hor markii uu soo ifbaxay Dhaqdhaqaaqa Barnaamijka Bilaashka ah ee 'Free Software Movement' oo markii dambe ka koobnaa midowga waxa hadda loo yaqaan GNU / Linux, taasi waa, Nidaamyada Howlgalka ee Linux-ku saleysan iyo barnaamijyo lagu uruuriyay falsafadda GNU.
Maantana abuurista, adeegsiga iyo faafinta Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux waxaa markaa gacanta ku haya Dhaqdhaqaaq «Teknolojiyadeed», bulsho diyaar u ah inay qanciso baahida loo qabo in la fuliyo mashaariic bilaash ah oo bilaash ah Kahor horumarka baaxadda leh iyo inta badan ee softiweerka gaarka loo leeyahay, si loo abuuro da'daas dahabiga ah ee softiweerka halkaas oo horumarinta kombiyuutarada ugu horreeyay iyo barnaamijyada kombiyuutarka ay si qoto dheer u wada shaqeynayeen iyo tacliimeed.
1.1 Tobankii sano ee 50aadkii / 60aadkii
1.2 Tobankii sano ee 70aadkii / 90aadkii
2.1 Goobaha teori
2.2 Goobaha wax ku oolka ah
2.3 Tiknoolajiyada waxtar leh
Tobankii sano ee 50aadkii / 60aadkii
Waxay ahayd qiyaastii sannadihii 50-meeyadii / 60-aadkii xubnihii xisaabinta sayniska ee xilligaas oo ka kooban isla saynisyahano kombiyuutar, aqoonyahanno iyo kooxo cilmi baarayaal ah oo iskaashi wada shaqeyn ah ka dhexeeyey, waxay sameeyeen inta badan barnaamijyada loo abuuray beel ahaan.
Oo waxaa loo qaybiyey (Nidaamyada Hawlgalka, Barnaamijyada iyo Xeerarka Isha) iyada oo gacan laga helayo kooxaha adeegsadayaashooda, dhammaantood iyada oo ujeedadu tahay in wax laga beddeli karo si loo gaadho qabanqaabada loo baahan yahay iyo / ama horumarinta.
Toban sano 70 / 90
Sanadihii 70-meeyadii ayaa isbeddelkani wuxuu bilaabay inuu ka noqdo, si looga guuro kombiyuutarada waaweyn ee qaaliga ah ee xarumaha jaamacadaha iyo hay'adaha dowlada oo ay weheliyaan xubno la shaqeeya wadashaqeyn leh awoodo iyo xasilloonida Nidaamyada Hawlgabka Unix-u eg (adeegsade badan iyo hawl-badan) kooxo yar yar oo ka shaqeeya xarumaha cilmi-baarista ee gaarka loo leeyahay, inta badanna leh Nidaamyada Hawlgalka ee lahaanshaha.
Nidaamyada Hawlaha Gaarka ah ee sii kordhaya ee leh xaddidaad badan oo sumadeed, xuquuqda daabacaadda, kireynta, shatiyeynta, iyo waxyaabo kale oo badan, oo xaddiday isticmaalka bilaashka ah ee ballaaran.
Laakiin maalmahan dagaalka ka dhanka ah Software-ka lahaanshaha iyo xirnaanshaha, maalin kasta dad aad u tiro badan oo shaqsiyadeed (guri) iyo xirfadlayaal (shaqo) ah ayaa bilaabaya ama dib u bilaabaya adeegsiga Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux xoog.
Laakiin marka la soo koobo, Taariikhda Software-ka Bilaashka ah iyo gaar ahaan GNU / Linux waxay marto dhacdooyinka caanka ah ee Richard Stallman 1984 markuu abuuray mashruuca GNU iyo Linus Torvalds 1991 markuu qoray kernel la mid ah Unix-ka kombiyuutarada waqtigaas.
Bixinta natiijada midowga labada mashruuc Nidaam Hawleed dhameystiran oo la yiraahdo GNU / Linux, in ay ahayd nooca Unix iyo in sidoo kale lagu maamuli karo kombiyuutarada guriga (PC) ee wakhtigaas. Oo la gaaro maanta halkaasoo loogu talagalay guryo badan, ganacsi iyo naqshadaha cilmi-baarista.
Haatanna waxqabadka hadda ee kombiyuutarada, ciriirigooda ayaa gaaray guryaha sababtoo ah qiimaha la awoodi karo ee Qalabka, iyo baahida sii kordheysa ee ah in la yareeyo kharashyada isticmaalka, dayactirka iyo cusbooneysiinta Software-ka Gaarka loo leeyahay, oo iyaga la siiyay fursad qaali ah oo loogu talagalay Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux si ay u qabtaan boos sharaf leh marxaladdan cusub ee bulshada macluumaadka.
Laakiin, ka baxsan tixgelin kasta oo ku saabsan kharashyada ama waxqabadka marka loo eego Barnaamijka Khaaska ah, Software-ka bilaashka ahi wuxuu la jaan qaadayaa danaha muwaadiniinta marka loo eego shirkadaha, waa mid casri ah oo casri ah oo aan hoos u dhigayn xorriyadda abuurka, adeegsiga, faafinta, barashada iyo la qabsiga aqoonta.
Waana halkaan halkaan Software-ka bilaashka ahi wuxuu ku habboon yahay afartiisa (4) xorriyadeed ama mabaadi'da baahida muwaadinka muhiimka ah. Aynu xusuusano in afarta (4) xorriyadaha Software-ka Bilaashka ahi ay yihiin:
Isticmaal: Xorriyadda loo adeegsado softiweer si aad ugu adeegsan karto si xor ah iyadoon loo eegin ujeeddadeeda.
Daraasad: Xorriyadda in la barto sida software-ka loogu talagalay in lagu arko sida ay u shaqeyso.
La wadaag: Xorriyadda in loo qaybiyo softiweerka si loo hubiyo inaan ka caawin karno kuwa kale inay haystaan.
Si aad u ladnaato: Xorriyadda wax ka beddelka cunsurradeeda, si loo hagaajiyo loona waafajiyo baahiyaha kala duwan.
Sidaa darteed, barashada isticmaalka iyo si hufan u isticmaal inta ugu badan ee Software-ka Bilaashka ah waxay ka dhigan tahay fursad iyo baahi jirta. sidaa darteed qayb aad u tiro badan oo ka mid ah Bulshada Aadanaha oo aan laga jeclayn Nidaamka hadda jira ayaa si is-hoosaysiin ah ugu sii jiri kara casriyeynta teknolojiyada iyadoon la tixgelinayn luminta xuquuqdooda Asturnaanta, Amniga iyo shakhsiyadda iyo Xoriyadda wadajirka ah.
Xaqiiqdii qaar badan oo ka mid ah bilowga iyo cusub ee aagga SL iyo GNU / Linux, laga yaabee in badan oo ka mid ah moodada ama xiisaha, weli Isticmaalayaasha dhaqameed ee Nidaamyada Howlgalka Gaarka ah (Windows / MacOS) waxay halkan ka bilaabayaan halka ay ugu wacan tahay akhriska badan ee laga heli karo SL iyo GNU / Linux kumanaan ama malaayiin degello ah (Blog, Magazines, Forums) oo ku takhasusay mowduuca., ama sababtoo ah saaxiib ama jaalle ayaa kuu sheegay inay ku isticmaalaan guriga ama shaqada.
Iyo talaabadan yar, laga yaabee in badan oo soo dejista oo ku rakibaan GNU / Linux Distro hal ama labo Operating System ah mashiinadooda si ay si buuxda ugu galaan mowduuca, taas oo aan fiicneyn ama xun. Laakiin waayo-aragnimadayda ugu fiican ee lagu gaaro kala guur aad u fiican iyo u guuritaan rasmi ah SL iyo GNU / Linux waxay marayaan 2 marxaladood kahor ansaxinta kama dambaysta ah.
Midda hore waa in loo adeegsado barnaamijyo fara badan oo bilaash ah (Barnaamijyada GNU) nidaamyadeenna hawlgalka ee shirkadda ka dibna loo gudbo tan labaad oo ka hadlaysa la qabsiga iyo la qabsashada tikniyoolajiyadda aagga iyada oo aan wax ku rakibnayn si sugan ama xagjirnimo ah, in waa, adoo adeegsanaya adigoon rakibin. Taasna waxaa jira boggag internet iyo teknoolojiyad waxtar leh oo noogu adeegi kara ujeedkan, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
Websaydhyadan ayaa diiradda lagu saarayaa sahaminta mid kasta oo hadda jira ama duug ah GNU / Linux Distro oo si faahfaahsan u faahfaahsan, heer farsamo oo aad u weyn oo ay la socdaan falanqeyn farsamo oo weyn oo waxtar leh iyaga. Taas oo sahleysa barashada waqtiga ku saabsan ee loo yaqaan 'Distro' inuu isticmaalo ama bilaabo isticmaalka iyada oo aan lahayn dhibaatooyin badan ama hubin la'aan.
Liiska Qaybinta Linux
Goobaha wax ku oolka ah
Websaydhyadan ayaa diiradda saaraya sidii ay noo oggolaan lahaayeen inaan si toos ah ula falgalno khadka tooska ah ee GNU / Linux Distros iyo barnaamijyadooda si la mid ah haddii aan ku rakibnay kombuyuutarradeena si aan u kordhinno heerkeena khibrada dhabta ah ee isticmaaleyaasha leh alaabooyinka la soo saaray.
Tiknoolajiyada waxtar leh
Waxaa jira teknoolojiyad badan oo wax ku ool ah oo laga heli karo GNU / Linux World iyo nidaamyo kale oo gaar loo leeyahay sida MS Windows ama Mac OS, laakiin midkoodna ma sahlana in la rakibo oo loo isticmaalo sida VirtualBox. Tani iyo teknoolojiyada kale ee la midka ah ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay fuliyaan (dib u abuuraan) rakibidda iyo isticmaalka noocyada kala duwan ee GNU / Linux Distros si 100% dhab ah iyada oo aan loo baahnayn in si xagjir ah loo beddelo hawlgalka Nidaamka Hawlgalkooda hadda.
Casriyeynta tikniyoolajiyadda ee hadda jirta waxay u egtahay mid gaar u ah kharashyada badan, xaddidaadda iyo faa'iido darrooyinka isticmaalka Software-ka Gaarka loo leeyahay, oo lagu daray ku takrifalka iyaga ee Dawladaha ama Qaybaha Dhaqaalaha ee isku dayaya inay ku daydaan, kormeeraan ama xakameeyaan muwaadiniinta muwaadiniinta ah iyaga oo adeegsanaya.
Laakiin kii Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux waxay na siinayaan fursad aan ku noolaan karno suurtagalnimada, beddelka ah in qayb muhiim ah oo ka mid ah softiweerka hadda socda lagu sii horumariyo meel ka baxsan xukunka ganacsiga iyo ganacsiga., taas oo ah, waxaa si shaqsiyan iyo wadajir ah u horumariyey muwaadiniin ka madax banaan danaha xun.
Si loo dheelitiro ku qanacsanaanta iyo kalsoonida ay softiweerku adeegsadeen uusan ku xadgudbin xuquuqdeena Asturnaanta, Amniga iyo shaqsiyaadka iyo Xoriyadda wadajirka ah, in ay la qabsan karaan dad badan intii suurtagal ah iyo ujeeddo kasta, iyo in heerka ugu sarreeya ee Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux la ilaaliyo waqti ka dib, taas oo ah, in Software-ka la isticmaali karo, la baran karo, la wadaagi karo, lana wada horumarin karo dhammaantood.
Waxaan rajeyneynaa in xiriiriyeyaasha lagu bixiyay daabacaddan ay gacan ka geysanayaan faafinta aqoonta iyo adeegsiga Software-ka Bilaashka ah iyo GNU / Linux iyada oo aan lahayn dhibaatooyin waaweyn oo ka dhigaya kuwa isticmaala cusub inay diidaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Baro barnaamijka bilaashka ah iyo GNU / Linux adigoon rakibin
Jiminy Cricket dijo
"Tobanaan sano ayaa laga joogaa tan iyo markii uu soo ifbaxay Dhaqdhaqaaqa Software-ka Bilaashka ah oo markii dambe sameeyay midowga waxa hadda loo yaqaan GNU / Linux, taas oo ah, Nidaamyada Hawlgallada ee ku saleysan Linux iyo barnaamijyada lagu ururiyay falsafadda GNU."
Maxaa dhacay markaa?
Maxaad u soo bandhigeysaa shaqaale hoosaad intaas le'eg haddii aakhirka aadan ka sheekeyn wixii dhacay "muddo tobanaan sano ka hor ku filan"?
Jawaab Pepito Grillo
Linux Post Ku Rakib dijo
Wixii dhacay waxaa lagu soo koobay sadarka labaad iyo si faahfaahsan qodobada 1.1, 1.2 iyo 1.3, laakiin fahamku waa mid xor ah oo shakhsi ah, sidaa darteed, wax dhib ah malaha haddii aad si shaqsi ah u fasirtay.
Waad ku mahadsantahay si kasta oo aad u aqriso ugana faallooto maqaalka.
Jawaab Linux Post Install
Sysadmin: Farshaxanka Nidaamka iyo Maamulaha Server
Linux Kernel 4.20 waxay u timid sidii hadiyad Kirismas ah